मे महिनाको मेरो डायरी - GurkhaMediaमे महिनाको मेरो डायरी - GurkhaMedia
मे महिनाको मेरो डायरी
८६ वर्षकी वृद्धा आमालाई बिहानै फेसटाइममा दर्शन गरेपछि प्रत्येक दिनको सुरुवात हुन्छ । मन्दिर, गुम्बा, चर्च र मस्कको दर्शनभन्दा धर्ती माताबाट आशीर्वाद लिनु मलाई आनन्द लाग्दछ । बेलायत, अस्ट्रेलिया र नेपालमा बाँडिएको हाम्रो आमाका सन्तानहरु मायामा अडिएका छौं । बच्चाहरु कुनै दिन छुटाउँदैनन् आमासँग जोडिन । उमेरले निकै पाको भए पनि गफ गर्न अझै टाठै छिन् । मोबाइल फोन चलाउने, आईप्याडमा समय हेरि विदेशमा रहेका छोराछोरी, नातिनातिनाहरुलाई फेसटाइम, मेसेन्जर र भाएबरमा कल गर्न पनि जान्दछिन् ।
दुःख सुखको कोणबाट मे महिना धेरै मिश्रित हुन गयो । आँखाबाट आँसु कमै झर्ने गर्छ । तर यसपाली झर्‍यो । मेरो शरीरलाई सक्रिय राख्न गत पाँच वर्षयता प्रत्येक महिना १०० माईल्स (१६० कि.मि.) दौडिरहेको छु। अझसम्म पूरा नगरेको कुनै महिना छैन । बिडम्बना, पञ्चतत्वले बनेको शरीर कहिलेकाहीं कमीकमजोरी हुन्छ नै । खुट्टामा पीडा भएको निकै भयो । फिजियो गरेको पनि धेरै महिना भइसक्यो तर कुनै सुधार भएन । फिजियोबाट नहुने भएपछि हस्पिटलतिर रिफर गरेका छन्। फिजियोकै क्रममा थेरापिष्टले एक हप्ता आराम गरेर हेरौं । केही फरक हुन्छ कि । त्यो हप्ता मलाई अति कठिन भयो । गत पाँच वर्षमा चार दिनभन्दा बढी शरीरले लगातार आराम गरेको रेकर्ड नै छैन । नियम उल्लंघन गर्ने बानी त सानैबाट थियो । त्यही भएर होला सेनामा हुँदा प्रमोसन नभएको । दौडिन छोडिनँ । एक प्रकारको मात लागेको जस्तै भयो ।
मे महिनाको पहिलो हप्ता नै हो । एक दिन निकै पानी बर्सिरहेको थियो । दौडिन निस्केँ । एक माईल पुगेपछि खुट्टामा पीडा हुन थाल्यो । तर छोड्नेवाला थिएन । पानीले निथ्रुक्कै रुझेको थियो । पसिना पनि आएको थियो । खुट्टा चलाउने स्थिति नै थिएन । आँखाबाट बर्रर आँसु झर्‍यो । अब दौडिन नसकिने भयो । १०० माईल्सको च्यालेन्ज पनि टुट्ने भयो । मनमा यस्तै कुरा खेल्दै थियो । तर माईन्ड भन्थ्यो । यू क्यान डू ईट । जबरजस्ती त्यो दिन पनि छ माईल पूरा गरिछाडेँ । बोडी माइन्ड ब्यालेन्सिङबारे केही पुस्तक पढेको थिएँ । माइन्ड त बलियो नै छ र दुखाईलाई जसै पनि जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले दैनिकी कायमै राखेको छु । अहिले सहज हुँदै गइरहेको छ । र हस्पिटलको एपोइन्टमेन्ट पनि पर्खंदैछु ।
दुःखकै पाटोमा गाउँकै मामा पर्ने गगनसिङ गुरुङको प्लमस्टिड, लन्डनमा देहान्त भयो । मे १८ तारिखमा फ्यूनरल भयो । ६० जना मलामी जान पाउने भयो । फ्यूनरलको कार्यक्रम चलाउने अभिभारा पाएको थिए ।
सुखद् क्षणहरु पनि केही अवश्य भयो । मे जन्म महिना हो । खासै बर्थ डे मनाउने चलन छैन । म गाउँले ठीटो भएकाले साधारण दालभातमा रमाउछु । युनी पढ्न गएकी सानी छोरी पनि घर आई केक बनाइन् । ठूली छोरी त जागिर खाएको निकै भइसक्यो । बाबा के किन्दिउँ बर्थडेमा ? मौका पाएको बेला बोली हाले । झार काट्ने मेसीन । गज्जब भयो । जीटेक कोर्डलेस लोनमोअर किन्दिइन् । ब्यट्रीबाट चल्दोरहेछ । वातावरण मैत्री र चलाउन पनि सजिलो । दुईपटक त झार पनि काटिसकेँ ।
यही महिनामा भिजिनरी ग्रुपका सिइओ तथा लिडरसीप कन्सिओस्नेस् कोच ईन्द्र गुरुङ, बिक्कि गुरुङ र प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचीव तेजबहादुर गुरुङसँग लकडाउनका बेला खेलकुदबाट कसरी मद्दत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।
विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मे महिना अति राम्रो भयो । हालै निर्वाचित लन्डन बरो अफ हन्स्लोका मेयर विष्णु गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय स्काई रनर ले. रि. कुसाङ गुरुङ र गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतकी अध्यक्ष पुनम गुरुङसँगको कुराकानी रोचक र उपलब्धिमूलक रह्यो ।
‘अक्सिजन पठाऔं । नेपालीको ज्यान जोगाऔं’ नाराका साथ चालिएको अभियानमा सक्रियतासाथ लागियो । आफ्नै गाउँले पञ्चासे हर्पनडाँडा समाज यूकेबाट दुई दिनमै पन्ध्र सय बहत्तर पाउन्ड र ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीबाट एक हजार आठ सय पाउन्ड जम्मा गरेर एनआरएनए वेलफेयरलाई हस्तान्तरण गरियो । आफ्नो फुलटाइम काम त छँदैछ । काममै एक जना साथीले पीङ सुई गोङ्ग (हात सुइङ गर्ने कसरत) को बारे परिचय गर्‍यो । महिनाभरि नै प्रक्टिस गरेँ । अति लाभदायक भएको महसुस गरेको छु । यो कसरत ताईवनका माष्टरलाई फेङ्ग सानले सुरुवात गरेका रहेछन् ।
डा. योगी विकाशनन्दको “जीवन के हो” पुस्तक फेरि पढेँ । आँखाबाट आँसु झरे पनि मे महिनामा पनि १००.९ माईल्स (१६२ कि.मि.) दौडिएछु । भोलिको दिन के हुन्छ कसैलाई थाह छैन । कोभिडले कति आफन्त र चिनेका साथीलाई लगिसक्यो । तर जति बाँचिन्छ। डरबिना बाँच्ने तरिका सिकौं । सकारात्मक सोच बनाऔं । यहि महिना कोभिडको दोस्रो भ्याक्सिन पनि शरीरमा पस्यो । भएका कुराहरु शेयर गर्दा मन हल्का हुन्छ । कसैलाई केही नौलो पनि हुनसक्छ र कसैलाई तितो पनि होला । कसैले के पो भन्ने हो कि भनेर सोच्नुभन्दा तपाईंलाई के गर्दा मजा आउँछ त्यही गर्नु उत्तम । आँसुलाई हाँसोमा बदल्नुछ । सुरुवात आफैंबाट गर्नुछ ।